प.ब. सरकारले पर्या-पर्यटन केन्द्र खोल्ने - खबरम्यागजिन
Homeखबरप.ब. सरकारले पर्या-पर्यटन केन्द्र खोल्ने
January 4, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर 0
विभागले भनेअनुसार नयाँ 15 पर्या-पर्यटन केन्द्रमा जनवरीदेखि बुकिङ शुरु हुनेछ। ती केन्द्रहरू हुन्, झाड़ग्राम जिल्लाका हाटीबारी, बाँकुड़ा जिल्लाका सुसुनिया, दार्जीलिङ जिल्लाका चटकपुर, पञ्जहोर (गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान अन्तर्गत), जलपाइगढी जिल्लाको मनदाबाड़ी (जल्दापारा नेशनल पार्क अन्तर्गत), नेमाटी (बक्सर टाइगर रिजर्व अन्तर्गत तहत), बोनी क्याम्प (सुन्दरवन)।
कलकत्ता,4जनवरी
राज्यका विभिन्न पहाडी क्षेत्रको पर्या-पर्यटन स्थापनाको लागि राज्य सरकारले पर्या-पर्यटन केन्द्रहरू खोल्ने भएको छ। पश्चिम बङ्गाल वन विकास निगमले यस्तो जानकारी दिएको छ।
जनवरी 2019 देखि राज्यभरि नै अरू 15 वटा पर्या-पर्यटन केन्द्र कोलिनेछ। अब बुकिङ मौजुदा साइटको माध्यमबाट गर्न सकिनेछ। निगरले विस्तृत योजना बनाएको छ। अब सबै इको-रिसर्ट्समा बुनियादी ढाँचाको विकासको लागि काम गरिनेछ।
वन विकास निगमले अहिलेसम्म 19 क्षेत्रमा इको-टूरिज्म रिसर्ट बनाएको छ। जसमा 13 उत्तर बङ्गालमा अनि6वटा दक्षिण बङ्गालमा छ। अब अरू 15 वटा पर्या-पर्यटन केन्द्र बनाइनेछ। उत्तर बङ्गालमा वन विकास निगम अधिनस्त जलढाका, मूर्ति, परेङ, रसिकबील, सुन्तालेखोला, लोलेगाँउ, लाभा, कलेबुङ, मङ्पङ, सामसिङ, पड़ोडाब्री, राजभट्ट र लेप्चाजगतमा प्राकृतिक रिसर्ट्स छन्।
वन विकास निगम, पर्यटन विभागको समन्वयमा राज्यमा होमस्टे पर्यटन विकसित गर्न पनि काम चलिरहेको छ। निगमले विभिन्न साइट बनाएको छ। जहाँ ठाउँको उपलब्धता हुनेछ। पर्यटकहरूको लागि वाचटावर पनि स्थापित गरिनेछ।
सकियो विनय खेमा मोर्चाको चिन्तन सभा: लिइए यस्ता प्रस्तावहरू